बैठक बसाउन भन्दिनुपर्‍यो – Sourya Online
बैठक बसाउन भन्दिनुपर्‍यो
सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १४ गते १:५९ मा प्रकाशित
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले ६ महिनादेखि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेकोप्रति दुखेसो गर्दै मंगलबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेखे । यो स्ट्याटसमा अहिलेसम्म ७० जनाभन्दा बढीले कमेन्ट गरेका छन् । लाइक गर्नेको संख्या २ सय नाघेको छ भने सात जनाले सेयर गरेका छन् ।
भट्टराईको स्ट्याटस र छानिएका केही प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत छ ।
हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक विगत ६ महिनादेखि बसेको छैन । यसबीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेकौँ घटना घटेका छन् । विचारसमूहका नाममा केही व्यक्तिले पार्टी छोडेर अलग पार्टी बनाएका छन् । आन्तरिक रूपमा थुप्रै विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ । पार्टी अध्यक्ष र महासचिवलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले पटक/पटक भेटेर बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दा पनि बैठक बोलाउने कुनै सुरसार छैन । आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक रूपमा अघि सार्नुभन्दा पहिले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नियम छ । अरू पार्टीका केन्द्रीय समितिका बैठक पटक/पटक बसेका समाचार सुनिन्छ । सचेत नागरिकका हैसियतले हाम्रो पार्टी एमालेका अध्यक्ष र महासचिवलाई तुरुन्त केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन यहाँहरूले पनि भनिदिनुपर्‍यो ।
हिमसागर तिमिल्सिना : यो त साह्रै लाजमर्दो कुरा भयो, योगेश कमरेड ।
विष्णु आचार्य : रेगुलर बैठक बसेर सही निर्णय गर्ने भए यो हबिगत हुन्थेन ।
विशाल : केन्द्रकै यस्तो छ हालत, अनि कहाँ राम्रो हुन्थ्यो पार्टी ।
मीना शर्मा : तपाईंजस्ता युवा नेताहरूले यसरी बाहिरै अपिल गर्नुपर्दा हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो रहेछ त ? धन्यवाद † सही कुरा बोल्नुभएकोमा ।
राजकुमार राई : दाइ हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ला अनि मात्र दबाब पुग्थ्यो कि †
हरि रेवेल : ल तुरुन्त डा. मनमोहनलाई सोधेर बोलाइहाल्ने रे । जाबो केन्द्रीय सदस्य भनेका नोकरजस्तै त हुन् नि भन्ने सोचेर खासै महत्त्व दिएनन् जस्तो छ ।
रामबाबु नेपाल : आफ्नो पार्टी संगठनलाई पोको पारेर बोरामा हालेका छन् । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍यो भन्दै घाँटी सुकाउँदै हिँड्या’ छन् । हिजो पालैपालो दौरा मैलाउनेहरूका नाम कहाँ बिर्सन सकिन्छ र ? मदन भण्डारीको नाम जपेर मात्र केही हुँदैन ।
गणेश लिम्बु : एमाले अहिले बिरामी मात्रै भएको हो, चुनावपछि मर्छ । यतिविधि पार्टीको केही काम छैन ।
जनक रावल : यस्तो कुरा त फेसबुकभन्दा पनि पार्टीभित्र राख्दा राम्रो हुन्थ्यो कि कमरेड ।
केदारनाथ गौतम : यस्तै हो भने हामी सबैले गहन ढंगले सोच्नुपर्छ ।
नारायण अधिकारी : पार्टीमा त्यति बेला बैठक बोलाउनुपर्ने वा बस्नुपर्ने हुन्छ, जतिबेला पार्टी जीवित छ, विचार छ, कार्य गर्न सक्छ । एमाले भन्ने पार्टी सायद जीवित नरहेको हुनुपर्छ । तसर्थ, यो बस्नै छोड्यो, बोल्नै छोड्यो, सुन्नै छोड्यो । अब निर्जीव चिजलाई कसरी सम्झाउनु ?
खगेन्द्र रिजाल : यो जनवादी केन्द्रीयताको नीतिविपरीत भयो कि ? पहिले त यहाँहरू केन्द्रीय सदस्यहरूले नै मौखिक वा लिखित माग गर्नुपर्‍यो नि त कमरेड । यसमा कि त अध्यक्ष र महासचिवको कि त योगेश कमरेडको गैरजिम्मेवारिता देखियो ।
राजेन्द्र पी शर्मा : ए.. भनेपछि अब बिचरा जनताले नै पार्टीका बैठक बोलाउन लाग्नुपर्‍यो । युवा भनी भाग खोज्नेको नि पारा यस्तो, गतिछाडा चाला त भएन †